Palestina: Mifampiresaka amin’ny Gaza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Janoary 2009 19:09 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Swahili, Español, عربي, English
Araka ny toe-javatra mahazatra ary koa na dia eo aza ny taha ambony amin’ny fahaiza-manoratra, dia mipetraka eo anelanelan’ny 13 sy 15 ny isan-jaton'ny fahafaha-mampiasa ny aterineto any Palestina (tafiditra ao anatin’izany Cisjordania sy Gaza ). Na dia eo aza ny fanafihana manatona an’I Gaza dia hita kosa fa mihena tanteraka ny fahafahana miserasera amin’ny aterineto. Na dia eo aza izany dia misy ihany ireo mpitoraka blaogy vitsivitsy nanoratra mivantana avy any Gaza , maro mponin’I Gaza mandefa hafatra an-tsoratra sy manao antso an-tarobia mankany ivelany mba ahazoana antoka fa re ny tantaram-piainan’izy ireo.
Efa mpanao tatitra momba an’I Gaza nandritra ny andro maro ankehitriny i Mohammad avy amin’ny KABOB fest izay mipetraka ao Cisjordanie. Nilaza taminay izy tao anatin’ny blaoginy voalohany tamin’ny 29 Desambra hoe:
Te-hiantso ireo dadatoako aho hanontaniako azy ireo momba ny fiainan’izy ireo sy ny momba ny fianakavian’izy ireo, kanefa tsy afaka manao izany aho mandritra ny andro. Tena manahy aho ny ahafantatra hoe manao ahoana izao no mety ho fiaimpiainan’izy ireo any. Nefa rehefa avy mahaantso an-telefonina aho dia miramiram-pahagagana tokoa.
Niteny tamiko ny dadatoako Jasim fa mihatsara ny toe-draharaha ankehitriny, mbola misy ihany ny tahotra fa kosa efa nanomboka mihamahazo aina kokoa ny mponina. Nilaza izy hoe: niaretanay ny daroka avy amin’ny fanafihana voalohany, ary izany no nanampy anay hijoro mandrak’androany. Nilaza izy fa nangina ho tokony teo amin’ny antsasak’adiny ny lanitry Khan Younis, nefa nanafika ny morontsiraka kosa ireo sambo mpiady. Mahery dia mahery ny feony, toy ireny hoe niresaka taminy mialoha ny fotoanan’ny fitifirana (famonona) aho, aza dia manahy loatra hoy izy tamiko.Tsy manana hery toy ny mahazatra intsony ry zareo, koa nolazaiko izy momba ny fihetsiketseha-mpanoherana sy ny fifandonana miseho ao Cisjordanie ary ny fanohanana miely eran’izao tontolo izao. Niteny azy aho fa tsy nisy nanadino izy ireo, taorian’izay dia niangavy tamiko izy mba hivavaka foana ho azy ireo. Efa natory ireo zanany izay zandriny indrindra, fa ny zanany vavy Haneen sy Yaqeen kosa no mbola mitsangana. Nanafatra azy aho mba hiteny azy ireo fa mieritreritra ny momba azy ireo izahay rehetra.
Niantso ny dadatoako Mahmoud aho rehefa avy eo. Nilaza izy fa efa niandry fahafatesana omaly. Niantso azy an-telefonina mantsy ny israelianina ary nanambara taminy fa ho darofan’izy ireo baomba ny tranony afaka minitra vitsivitsy. Nampihorohoro anay rehetra izany, ary androany anefa no nampahafantariny fa efa mazava izao fa nandefa izany hafatra an-telefonina izany tany amin’ny tokantrano an'aliny ireo miaramila Israelianina. Fomba fiady mahatsiravina sy miharo habibiana, natao hampihorohorona olona anarivony mitoetra ao an-tranony izany.
Indrisy fa hanjavona tsy ho ela ny fanantenany. Nitondra tatitra indray I Mohammed, ny 3 Janoary
Niezaka niahntso an-telefonina an’I dadatoako Mohammad ao an-tanànan'iGaza indray aho. Nandritra ny resaka nifanaovana no heno nisy baomba nirefotra tokony ho isaky ny 20 segondra eo ho eo. Tahotra no bodofotsy nandrakotra ireo vahoakan’i Gaza ary ny tanànan'i Gaza indrindra indrindra tao anatin’ny hirifirin’ny hatsika nandritra ny alina. Mifariparitra anatin’ny haizin’ny lanitra ireo tifitra basy sy ny fipoahana izay hivezivezen’ireo fiaramanidiana sy ireo helikoptera mpiady tsy taka-maso. Tsy misy mahafantatra intsony hoe inona no mety ho voatifitra. Nilaza tamiko ny dadatoako fa efa nisy fipoahana baomba nanodidina azy ireo, na akaiky izany na lavitry ny toerana, avy amin'ny lafin-trano rehetra any, eny fa na dia ny toeram-pampielezam-peo ao an-toerana (radio) izay ikohizana amin’ny fahafantarana ny mitranga rehetra aza dia tsy afaka mamantatra tsara hoe aiza avy ireo lasibatra voatifitra. Tsy dia azon’ny olona antoka aloha raha hoe nikendry trano fonenana, trano mijoalajoala, moske na koa toera-manan-tantara ny tifi-danitra, noho izany dia tsy nisy olona ka mahafantatra ny mety ho fiovan-javatra eo amin’ny fomba enti-miaro tena. Ao anatin’ny ady mantsy , na ho an’ny vahoka na ho an’ny miaramila dia tsy misy zava-mampatahotra ohatry ny hoe tsy fahafantarana izany.
Nampiseho tamin'ny antsipirihany ireo antso marobe nisy tamin’ny fianakaviana tao Gaza izy tao anatin’ny lahatsorany fahatelo, izay mampitaha ny toe-draharaha misy ao amin’ny an-tanànan’I Gaza ka hatrany amin’ny Khan Younis. Nanazava ny antso an-telefonina iray niaraka tamin’ny vadin’ny dadatoany izy.
Niresaka tamin’ny Areej indray aho. Ohatry ny efa mba mitony kely izany izy, kanefa tsapa fa mbola mihorohoro ihany. Nanontany azy aho momba ny zazakely. Nilaza izy fa matory eo akaikiny Yazeed. Rendri-tory ihany koa I Dina, ary notenenin-dreniny I Nada sy Hava mba hamonjy ny efitranon’izy ireo, izay heverina fa mety azo antoka. Nanontany azy aho raha toa ka mahazo hafanana izy ireo manoloana ireo varavaran-kely misokatra izay talaky rivotra, fa namaly kosa izy hoe misosona akanjo araka izay vita izy ireo ary koa manao izay mety amin’ny firakofana bodofotsy be dia be, saingy mandritra ny andro sy ny hariva kosa dia tsy dia mangatsiaka loatra. Nanontany ny momba an’I Adham aho, zanany 11 taona. Nilaza tamiko izy fa vao avy nandrehitra labozia anankiroa io zanany io teo dia avy eo namelatra ireo kilalaony ka niezaka na dia eo aza ny hirifirin’ny hatsiaka sy ny tahotra ary ny daroka baomba, ny fahafatesana sy ny ratram-po. Manana kilalao rafitra biriky (lego) sy fiara kely ary miaramila kilalao vitsivitsy izy. Tsy nanelingelina ny hametraka fanontaniana azy aho ny mety ho fihetsiky ny zanany milalao ireo miaramila kilalao. Sady tsy te ahafantatra izany koa aho.
Nandefa vaovao ara-potoana avy amin’ny namana tao Gaza ihany koa I Ayesha Saldanhan’ny Bint Bittuta ao Bahrain ao amin'ny Global Voice-ny . Ny hafatra farany avy amin’ny namany, Hasana, ny faran’ny amin’ny andalan-dahatsoratra:
6:30 maraina: “Tsy misy mandeha avokoa na ny telefonina na ny herin’aratra. Vao avy nifoha aho no nahita ny hafatrao (sms). Henoko mirefotra mafy dia mafy ny tifitra tafondron’ireo fiara mifono vy. Heno migodogodona sy miroandroana ireo feo. Tsy haiko fa angamba efa manakaiky ry zareo.”
8:20 maraina: “mbola tsy manakaiky aloha, enga anie ho toy izay. Raha toa ka mizihitra tsy mandeha ny herin’aratra dia tsy afaka izahay. Mihezaka miantso na na mandefa hafatra (sms) ny anabaviko aho fa tsy nisy vokany.”
1:20 hariva: “nanontany ahy ny vadiko fa maninona aho no mikentrona. Tolory ahy izay zavatra mety hanome ahy fanantenana dia hitsikitsiky aho, hoy aho taminy. Androany rehefa nanomboka nihamaro ireo zavatra tsy maintsy ilainay, fanafody, sakafo, fitaovana fanadiovana, dia nanapakevitra aho hiakatra an-tanandehibe eny fa na dia zeran-dry zareo baomba aza ny tsenan’I Gaza. Nahafaty olona 5 sy nandratra vondrona olona izy ireo. Nitifitra baomba ny trano 2 teo akaikin’ny toeram-pivarotana ny F16 rehefa niditra ny tsena aho. Nieritreritra mitovy tamiko ny olon-drehetra. Na ny tsena na ny moske no halehako, tena very hevitra aho. Novidiako ny antsasak’ireo izay mety ilainay dia nody haingana tany an-trano aho. Eny an-dalana hody dia nodarofan’izy ireo baomba ny trano iray hafa akaiky ny tranoko. Nitoraka nisinisy ny fiara vy (tanky) omaly alina ka tena natahotra mafy izahay”
6:30 hariva: “Raha miharatsy ny fandehan-javatra dia hanatsofoka ny karatra SIM ao anatin’ny findain’ny vadiko aho. Mitoraka baomba I F16 amin’izao fotoana izao ary ny mihamafy ny feon’ny fiara mpamonjy voina (ambulance). Miharatsy noho ny omaly hatrany ny androany.